मेयरले गुन्यूचोलो उपहार दिएपछि ज्योति मगरको यस्तो ‘डाइलग’ – Todays Nepal
By टुडेज नेपाल	 Last updated May 6, 2018
वैशाख १३ गतेदेखि जुम्लामा प्रादेशिक कृषि, पर्यटन औधोगिक व्यापार महोत्सव सञ्चालन भइरहेको छ । महोत्सवमा स्थानीय र राष्ट्रिय कलाकारहरुले भने आफ्नो प्रस्तुतिमार्फत जुम्लालाई तताइरहेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाको आयोजनामा भएको महोत्सवमा भने शुक्रवार ज्योति मगरको प्रस्तुति थियो ।
प्रस्तुतिको क्रममा भने चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले गायिका मगरलाई नेपाली गुन्यूचोलोको उपहार दिएकी छन् । सेजुवालले उपहार दिँदै भनिन्, ‘भाषाको उदगम स्थल, संस्कृतिको मुहान जुम्ला जिल्ला भएको हुँदा चन्दननाथ नगरपालिकाबाट धोती चोलो लगाउन गिफ्ट दिएको हो ।’ उनले हाम्रो पहिरन यूरोपियन मुलुकको जस्तो नभई हाम्रो माटो र भूगोल सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्दै ज्योति मगरलाई आग्रह गरिन्, ‘संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न भन्दै उपहार दिएको छु ।’
यसैगरी महोत्सवको सवै दिनहरु मध्य शुक्रवार ५ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका आयोजकले जनाएकोछ । महोत्सव २३ गते सकिने आयोजक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामदत्त रावलले जानकारी दिए । यसैगरी नायक निखिल उप्रेती, देउडा तथा लोक गायक रेखा जोशी , प्रकाश सोनी, पाँडे, जिक्री, कर्णाली प्रदेश आइडल हिक्मत शाही, कर्णालीका चर्चित देउडा गायक पूर्णप्रसाद धिताल, कालिकोटका कमला धामीसहित चर्चित कलाकारहरुले मनोरञ्जन दिइरहेका छन् ।
एक हजार ८ सय ७४ वर्ष पुगेको जिवित मानिस नेपालमा भेटिए , प्रमाणसहित
शिक्षण अस्पतालको बिजोक, शौचालयमा चुकल समेत छैन -मोदीको चाकडीकी जनकपुरको सफाई ?
अन्तर्वार्तामै एलिजाको छोटो लुगाको आलोचना !
एकाबिहानै करिश्मा मानन्धरको घर पत्रकार पुग्दा यस्तो अवस्थामा फेला परे !
प्रियंका र आयुष्मानले होस गुमाएपछि क्यामेराकै अगाडि गरे यस्तो हर्कत, हेर्नुहोस्…
भोजपुरी फिल्ममा निता ढुंगनाको बोल्ड अवतार